requierements Admission in jaamacadaha Ukraine. Study in Ukraine
Saxnaanta ku-Passport waa in aanay noqon wax ka yar, waayo, 1 sano Documents Waxbarashada (heerka O / SSCE / HSSC, Bachelor ama Master Degree haddii la heli karo). Foomka Codsiga buuxiyay xarfaha (riix halkan download Foomka Codsiga ), laakiin si ka badan u fududahay in ay codsan online (Foomka codsiga looma baahna haddii ay taasi ku)
E-mail la baaritaano dukumentiyada kor ku xusan waa in ka kooban macluumaad soo socda siday u kala horreeyaan
Magaca, Magaca Dhexe iyo Dhalashada Magaca awowga
Taariikhda & meesha dhalashada
ansaxnimada Passport (taariikhda arrinta & dhicitaanka)
cinwaanka joogtada ah
cinwaanka Ku Meel Gaarka / cinwaanka hadda (haddii uu ka duwan cinwaanka joogto ah)
Aqbalayno Codsiyada Study in Jaamacadaha Ukrain sanadka oo dhan. Waxaan aamin "Martiqaad Waraaqaha" ee ardayda codsada inaga dhex hore oo soo saari ay "Waraaqaha Martiqaad" ka / Jaamacadaha talinayaa doortay siday u kala horreeyaan. Jaamacadaha ayaa sii bixinaysaa "Waraaqaha Martiqaad" waraaqaha ka March / April si November (inta badan kordhiyay in December). Ka dib markii March / April, waxa ay qaadataa oo ku saabsan 3 maalmood oo shaqo si ay u soo saari ah "Martiqaad si Baro" warqad ka la doortay / talinayaa University.
* adeegga warqaadayaal Fast "TNT", "Oogeen", "FedEx" ama EMS samatabbixin "Martiqaad si Baro" ayuu Letter gudahood 4 si ay u 5 maalmood oo shaqo. Qiimaha adeegga warqaadayaal waa 100 $ US.
Fasallada ayaa u bilaabi ka 1da September. Ardayda ajinebiga oo loo ogol yahay inuu ku biiro Barnaamijyada Dhexdhexaad Ingiriisi ilaa 15 of November. Ardayda yimid ka dib markii 15-aad ee November ku biiri kartaa Barnaamijka diyaarinta kaliya. Riix halkan wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka diyaarinta.
* All Abaal Marintooda Sugan waxaa la bixiyaa marka ay imanayaan in Ukraine kharashka "Letter Martiqaad" 300 $ US marka laga reebo & kharashka warqaadayaal "TNT", "Oogeen", FedEx ama EMS 100 $ US i.e. total of 400 $ US . Lacagtani waxa la bixiyaa nagu dhex Western Union ama Gram Money Transfer ama Bank. Waayo, Macallimow / Heerka PhD “warqad martiqaad” Kharashka 400 $ US oo lagu eedeeyay warqaadayaal geyso tirada guud ka dhigaysa 500 $ US in la siiyo baxsheen.
ardayda waa in ay had iyo jeer siiyaan ay cinwaanka boostada ansax & lambarada xiriirka on foomka codsiga.
Ardaygu waa inay la xiriiraan safaaradda Ukraine in uu / iyada dalka si ay u dalbato fiisaha ardayga. Safaaradda Ukraine ka bilowdey aqbalayaan Codsiyada Visa Ardayga iyo arrinta Visa Student ka May / June iyo sii saaraan ilaa 15-November. Wadamada qaarkood safaaradda Ukraine bilaabataa Codsiyada Visa Ardayga iyo arrinta Visa Ardayga by 15 August si ay 15-November shaqeeya (sida caadiga ah waxaa loo kordhiyay in ay December / January). Dukumentiyada soo socda waa in la soo gudbiyaa ee Ukraine safaaradda si ay u helaan Visa Ardayga a,
Ardaygu waa in uu hubo ee aan keeno oo dhan Lacagaha iyo Documents hoos Authority Immigration Ukraine haddii kale xusay isaga / iyada Entry diidi kartaa oo dib ugu noqdo iyada dalka / masaafurin Ardaygu waa inay keenaan lacag Tuition buuxa, lacagta hoyga iyo kharashyada kale (Cash ama Travel Jeeggaga) Koorsooyinka ku xusan & Qiimaha doortay barnaamijka / jaamacad. Ardayga waxaa su'aalo garoonka Maamulka Socdaalka ku saabsan kharashka waxbarashada iyo kharashyada kale. Ardaygu waa inay keenaan qaar ka mid ah lacag dheeraad ah shakhsi sii. Fadlan booqo Qiimaha Living wixii macluumaad dheeraad ah.